Xog: Qasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay Qarax ka dhacay Duleedka Muqdisho iyo Bartilmaameedka Qaraxaasi. – Hornafrik Media Network
Xog: Qasaaraha Rasmiga ah ee ka dhashay Qarax ka dhacay Duleedka Muqdisho iyo Bartilmaameedka Qaraxaasi.
By HornAfrik	 Last updated Jul 12, 2017
Ugu yaraan 5 Qof ayaa ku geeriyootay, 6 kalana dhaawacyo ayaa ka soo gaaray Qarax ka dhacay Bar Koontarool oo ku taala Deegaanka Siinka Dheer ee Duleedka Muqdisho. Waxaana Qaraxan loo adeegsaday Gaari Xamuul ah oo noociisu yahay DAYNA, kaas oo ay Ciidamadda Ammaanku qabteen ka hor inta uusan Qarxin.
Ka Sakoow Qasaaraha Nafeed waxaa ku gubtay Qaraxaasi 5 Gaari oo Nooca Soomaalidu u taqaan Caasi ama Hoomeey, 1 Mooto Bajaaj, Gaari Wayn oo Xamuul ah, iyo kan qarxay. Waxaana gabi ahaanba go’day Wadadii uu Qaraxu ka dhacay oo ay ka qodmeen Godad waawayn,
Qaraxu waxa uu ahaa mid aad u baaxad wayn oo gil gilayo Deegaanka Siinka Dheer, iyadoona laga maqlayay qaybo badan oo ka mida Muqdisho. Waxaana sidoo kale lagu arkayay Biro waawayn oo Qaraxa qayb ka ahaa goobo ka fog goobta ay wax ka dhaceen.
Qaraxan ayaa ka hor inta uusan dhicin waxay Ciidanka Ammaanku qabteen Gaariga waday Qaraxa oo ay ka shakiyeen, kadibna waxay ku amreen inuusan goobta ka dhaqaaqin, iyagoo dalbaday Kooxda Miina Baarayaasha iyo Eeyaha uriya Qaraxyada. Waxay sidoo kale qabteen Ciidanku Darawalkii Gaariga iyo Koox kale oo ay uga shakiyeen inay la socdeen. hase yeeshee intii aysan soo gaarin Miina Baarayaasha goobta ayuu Gaariguu qarxay.
Xog ay heshay Hornafrik waxay ku ogaatay in Gaarigan uusan Bartilmaameedkiisu ahayd goobta uu ku qarxay oo ay doonayeen inay soo galiyaan Magaaladda Muqdisho, halkaas oo ay rabeen inay ku weeraraan Goobaha Shacabka isugu yimaadaan, Waxaana la aaminsan yahay in Qaraxan lala rabay Mid ka mida Goobaha Mashquulka ah, si ay Kooxdu u gaysato Khasaare badan.
Kooxda Alshabaab waxay sheegteen Masuuliyadda Qaraxan, taasoo ah wax la filayay. Waxayse sheegashadooda ku dareen inay Qaraxa la bartilmaameedsadeen Gaadiid Dagaal oo ay leeyihiin AMISOM oo ku sii jeeday Balidoogle, isla markaana ay qasaare gaarsiiyeen Kolonyadda AMISOM. Laakin Hornafrik waxay ogaatay in Goobta Qaraxu ka dhacay aysanba marayn wax Gaadiid ah oo ay leeyihiin Hawlgalka Midowga Afrika.
Maxaad ka ogtahay Qarashka ku baxaya Safarka Khayre ee Kismaayo iyo Shirka Wasiiradda ee Bari halkaasi lagu qabanayo,?
AMISOM oo sheegtay inay isku furayaan Degmooyinka Gobalka Hiiraan.